သင်တို့အဘို့သင့်လျော်သောလမ်းညွှန်ချင်ပါနဲ့ , Hotmail ဝင်မည်? ငါသည်သင်တို့ကို အကြောင်းပြု. လျော်ခြင်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောသတင်းအချက်အလက်များကိုဖန်တီးသောဤဆောင်းပါးမှတစ်ဆင့် Go , Hotmail အကောင့် Login လုပ်နည်း. သင်သည်သင်၏, Hotmail account ကိုဖန်တီးကြပြီမဟုတ်လျှင်ကလစ်နှိပ်ပါ ဒီမှာ သို့ , Hotmail အကောင့် Create ပဌမ.
ဤတွင်ကျွန်မများအတွက်ပြည့်စုံ Process ကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးပါပြီ Hotmail က Password ကို Recovery ကို လည်း. သင်ဤအတိုင်းလိုက်နာရန်ရှိသည် Hotmail က Password ကို Reset ဖြစ်စဉ်ကိုအလွန်ဂရုတစိုက်နှင့်သင်အောင်မြင်စွာမှမှန်ကန်စွာသတင်းအချက်အလက်များသည်ရန်ရှိသည် သင့်ရဲ့, Hotmail Password ကို recover.
သင်ရှာတွေ့ , Hotmail ဝင်မည်လုပ်ငန်းစဉ် ဤဆောင်းပါးတွင်အတွက်အလွန်လွယ်ကူပါတယ်. ငါလွယ်လွယ်ကူကူလူတိုင်းနားလညျနိုငျသောဤဆောင်းပါးကိုဖန်တီးရန်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဘာသာစကားသုံး. ခြေလှမ်းအမြန်လမ်းညွှန်အားဖြင့်ခြေလှမ်းကိုလိုက်နာခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးစီးပြီးနောက်သင်သည်သင်၏ထံသို့ဝငျကွ Hotmail က Inbox ထဲမှာ.
ဤဆောင်းပါး၏အောက်ဆုံးမှထိပ်တန်းမှတဆင့်သွားပြီး၏ပြီးပြည့်စုံသောအချက်အလက်များအကြောင်းကိုသိ , Hotmail အကောင့်သို့ဝင်ပါဖို့ကိုဘယ်လို နှင့်, Hotmail Password ကို recover. သင်သည်သင်၏သုံးစွဲဖို့ရှိ username နှင့် Password ကို သငျသညျမှသင့်အကောင့်ကိုဖန်ဆင်းပြီးနောက်ကိုသင်ရရှိထား သင့်ရဲ့, Hotmail Inbox ထဲမှာမှရဲ့ login.
, Hotmail ဝင်မည်လုပ်ငန်းစဉ် | အဆင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအားဖြင့်အဆင့်
များအတွက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖော်ပြချက်ခြေလှမ်းများ Lookout , Hotmail ဝင်မည်. ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းခြေလှမ်းကိုလိုက်နာခြင်းနှင့်မှအောင်မြင်စွာကဖြည့်စွက် , Hotmail အကောင့်သို့ဝင်ပါ.
တာဝန်ရှိသူတဦးကပေါ်တယ်ရဲ့ login ပု, Hotmail မှ Enter: www.outlook.com.
ယခု, ယင်းအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ “ဆိုင်းအင်လုပ်ခြင်း” login page ကိုရိုက်ထည့်ဖို့ခလုတ်.
ယခု, အီးမေးလ်ရိုက်ထည့်ပါ, ဖုန်းကို, or Skype in the given space and press “နောက်တစ်ခု”.
ယခု, ပေးထားသောအာကာသနှင့်စာနယ်ဇင်းအတွက်ဂရုတစိုက်သင့်ရဲ့ Password ကိုရိုက်ထည့်ပါ “နောက်တစ်ခု”.
နောက်ဆုံး, အားလုံးအထက်ပါအဆင့်များပြီးစီးပြီးနောက်သင်သည်သင်၏, Hotmail အကောင့်ရိုက်ထည့်ပါဦးမည်.
Hotmail က Password ကို Recovery ကိုလုပ်ငန်းစဉ်
အမှု၌သင်တို့ကိုသင့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုမေ့လျော့လျှင်စိတ်ပူစရာမလို, အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖော်ပြခဲ့တဲ့နှင့်သင့် password ကိုအလွယ်တကူပြန်လည်ကောင်းမွန်ပါလိမ့်မည်သည့်ခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာ.
ပဌမ, ဤနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်တရားဝင်, Hotmail က်ဘ်ဆိုက်ဝင်: www.outlook.com.
ယခု, သင့်ရဲ့အီးမေးလ်အတွက်သင်္ကေတပြပေါ် click နှိပ်ပြီးရိုက်ထည့်ပါ, ဖုန်းကို, Skype နဲ့စာနယ်ဇင်းသို့မဟုတ် “နောက်တစ်ခု”.
ယခု, ထိုနောက်မှပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ “ငါ၏အစကားဝှက်ကိုမေ့သွားတယ်” စကားဝှက်ပြန်လည်နာလန်ထူမှုလုပ်ငန်းစဉ်ဖွင့်လှစ်ရန် option ကို.
ယခု, သင်တစ်ဦးစာမျက်နှာပြီးသားထဲသို့ဝင်အီးမေးလ်ကအိုင်ဒီနှင့်အတူသင့်ရဲ့အကောင့်ကို Recover ပြောပါတယ်မြင်ရပါလိမ့်မည်, စာနယ်ဇင်းများ “နောက်တစ်ခု”.
ယခု, ဤနေရာတွင်သင်စကားဝှက်ကို recover နှင့်သင်ပေးထားသောအာကာသအတွင်းကိုတွေ့မြင်ဇာတ်ကောင်နှင့်စာနယ်ဇင်းရိုက်ထည့်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်တကနေကွဲပြားခြားနားသောအီးမေးလ်လိပ်စာကိုရိုက်ထည့်ပါရန်ရှိသည် “နောက်တစ်ခု”.
ပြီးနောက်, သငျသညျသင်ထည့်သွင်းမတူညီသောအီးမေးလ်လိပ်စာပေါ်တစ်ဦးကုဒ်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်, ကြောင်းကုဒ်ရိုက်ထည့်ပါနှင့်နှိပ် “Verify” ကြယ်သီး.
ယခု, ပထမအမည်ကဲ့သို့သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုအပေါ်ထည့်သွင်း, မျိုးနွယ်အမည်, မွေးရက်, တိုင်းပြည် / တိုင်းဒေသကြီး, ပြည်နယ် / နယ်မြေတွေကို, နှင့်စာတိုက် Code ကိုနှင့်စာနယ်ဇင်း “နောက်တစ်ခု”.
ယခု, ပထမဦးဆုံးဒီစာမျက်နှာပေါ်, သင်ဤအကောင့်ကိုသုံးခဲ့ကြသည်အခြား password များကိုရိုက်ထည့်ပါ, ထို့နောက်ကို select သင်သည်သင်၏အကောင့်နဲ့အောက်ကဖော်ပြထားသည် Microsoft ထုတ်ကုန်မဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်ပြီ. ထိုအကို select လုပ်ပါနောက်ဆုံးမှာ “နေရာ” သို့မဟုတ် “အဘယ်သူမျှမ” သောမေးခွန်း “သငျသညျအစဉျအမွဲမတိုင်မီ Microsoft ကဆီကတစ်ခုခုဝယ်ယူဖူး” နှင့်စာနယ်ဇင်း “နောက်တစ်ခု”.
ယခု, ပြီးခဲ့သည့်ခြေလှမ်းအတွက်, သင်အီးမေးလ်များကိုမကြာသေးမီကပေးပို့ခဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာများကိုရိုက်ထည့်ရန်ရှိသည်. နှင့်လည်းသင့်ရဲ့မကြာသေးခင်ကစလှေတျတျောအီးမေးလ်အတိအကျဘာသာရပ်လိုင်းများ.
နောက်ဆုံး, သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုတင်သွင်းခဲ့ပြီးအဲဒီအကြောင်းယူပါလိမ့်မယ် 24 သင့်ရဲ့တင်သွင်းသတင်းအချက်အလက်ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့နာရီ.
ဤဆောင်းပါးတွင်အဆိုပါအကြောင်း , Hotmail ဝင်မည်လုပ်ငန်းစဉ် နှင့် Hotmail က Password ကို Recovery ကိုလုပ်ငန်းစဉ်. ငါကိုအလွယ်တကူနားလည်သဘောပေါက်ရန်ခြေလှမ်းစတိုင်ကရိုးရှင်းပြီးခြေလှမ်းအတွက်ဤဆောင်းပါးကိုရာ၌ခန့်ထားပြီ. သင်ရုံခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာခြင်းနှင့်အောင်မြင်စွာဖို့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြည့်စွက်ရန်ရှိသည် , Hotmail အကောင့်သို့ဝင်ပါ.
မည်သည့်မေးခွန်းများကိုဘို့ဒါမှမဟုတ်သင်ဤဆောင်းပါးကိုအကြောင်းကိုသင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ပေးချင်ထို့နောက်ဖော်ပြထားခြင်းမှတ်ချက်အကွက်အောက်ရှိသုံးပြီးအပ်. သငျတို့သချင်တယ်ဆိုရင် တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအသုံးပြုသူအဖြစ်ဂျီမေးလ်ရဲ့ login သင်ဤ post ကိုလည်းခြေလှမ်းတို့ကခြေလှမ်းဖို့ကိုလမ်းညွှန်ကြလိမ့်မည်စစျဆေးနိုငျ.